यसरी गरिन्छ म्याग्दीमा भिर मौरीको शिकार ! - Pokhara News
यसरी गरिन्छ म्याग्दीमा भिर मौरीको शिकार !
कमल खत्री, पोखरा न्यूज – १७, असार । गुर्जा हिमालबाट बग्दैआएको सितमखोलाको किनारमा तीन दर्जन मानिसहरु जम्मा भएका छन् । उनीहरु सबैको नजर खोलाको किनारबाट ठडिएको अग्लो पहाडतर्फ छ । करीब ५०० मिटर अग्लो पहाडमा एकजना पुरुष डोरीको भर्याङको सहायताले पहाडको टुप्पोबाट तलतिर ओर्लंदै छन् । पहाडको टुप्पोमा केही युवक छन् । पहाडको टुप्पोबाट भिरतर्फ झर्दै गरेका ती पुरुष गुर्जाकै मह शिकारी अमृत छन्त्याल हुन् ।
मह शिकारीले काढेको महलाई भिरको शिरमा बस्नेले डोरी खेलाउने र फेदीमा बस्ने ज्यामीहरुले ठूलो आवाजमा संवाद गरेर तल झार्ने र टोकरीलाई पुनः मह शिकारीको नजीक पुर्याउने गर्छन् । परम्परागत रुपमा गुर्जामा चार समूहले वर्षैपिच्छे पालो लगाएर मह काढ्ने चलन रहेको छ । पहाडको काप अर्थात् पानीले नभिज्ने र हावाहुरीले समेत कम असर गर्ने ठाउँमा हुने भिर मौरीको चाकाबाट मह निकाल्ने काम निकै जोखिमपूर्ण छ ।
गुर्जामा रहेका २३० घरधुरी चार समूहमा विभाजन भएका छन् । पुस्तौँदेखि मह शिकारलाई व्यवस्थित गर्न यहाँ चार समूहले आलोपालो गरेर मह काढ्ने गर्छन् । एउटा समूहको पालो चार वर्षमा मात्रै आउँछ । यस वर्षका मह शिकारीहरुको समूहमा ३७ घरधुरी आबद्ध छन् । प्रत्येक घरका कम्तीमा एकजना मह शिकारको काममा व्यस्त छन् । गुर्जालीले मह शिकारलाई पुख्र्यौली पेशाको रुपमा मात्रै जोगाएका छैनन्, उनीहरुले सामूहिक रुपमा आयआर्जनको काम पनि गरेका छन् ।
कोही भिरमा चढ्छन्, कोही फेदीमा बस्छन् । कसैले खाना र खाजा बनाउने गर्छन् भने कसैले सङ्कलन भएको महलाई बोकेर गाउँमा पुर्याउने काम गर्छन् । एक महिीनाभन्दा बढी समय खर्चिएर भिरबाट सङ्कलन गरिने महलाई पकाएर परम्परागत रुपमा प्रशोधन गरी उनीहरुले बिक्री गर्छन् । भिरमा चढ्ने व्यक्तिलाई दोब्बर र अन्य व्यक्तिहरुले समान रुपमा मह बाँडफाँड गर्ने चलन छ । मह शिकारको कम्तीमा एक महीना यहाँका मह शिकारीहरुको टोली जङ्गल र गोठहरुमा बास बस्ने गर्छन् । यस वर्ष खास्कादेखि नजीकको खर्कमा रहेको गोठ र केही दिन जङ्गलमै त्रिपाल टाँगेर उनीहरुले मह शिकार गर्ने गरेका छन् ।
हरेक भिरमा मह काढ्नु पूर्व जिउज्यानको रक्षाको कामनासहित देवीदेवतालाई सम्झिएर धजा चढाउने गरिन्छ । भिरको शिरमा गाडिने किलोमा सकभर नफुक्ने गरी बाँधेर चोयाको पराङलाई पहाडतर्फ खसालिन्छ । भिरमा मह काढ्ने शिकारीले मह काढ्ने सामानको बन्दोबस्तसहितको झोला बोकेर निगालोको लौराहरुसहित पराङ चढ्छन् । मौरीको चाका नजीक पुगेपछि शिकारीले निगालोको लौरालाई भिर पहाडको कापमा ठोकेर पराङलाई बाँधेर सामान्य सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छन् । फेदीमा बसेका र भिरको शिरमा बसेका सहयोगीहरुले चोयाकै डोरीको सहायताले फेदीबाट आगोको मुस्लो शिकारीसामु पु¥याउने गर्छन् । शिकारीले आगोको मुस्लोलाई मौरीको चाका नजीक पुर्याउँछन् ।
आगोको धुवाँले मौरीलाई भगाउने र लठ्ठ्याउने काम गरिन्छ । धुँवा लगाएपछि लठ्ठिएर मौरीले टोक्न नसक्ने भएपछि शिकारीले मह काढ्न शुरु गर्छन् । भिरमा माहुरीले चाका छाडेपछि देखिने पहेंलो चाका फालेपछि देखिने सेतो पोलामा बल्न मह भेटिने स्थानीय युवा थमबहादुर छन्त्यालले बताए । अक्करे भिरमा डोरीको सहायताले मह काढ्ने गरेको दृश्य कहालिलाग्दो देखिन्छ । भिरमा चढेका शिकारी, भिरको टुप्पोमा बसेका सहयोगी र फेदीमा बसेका मह सङ्कलनकर्ताबीचको सहज संवादका लागि भिरको अगाडि पर्ने डिलमा केही हेरालो बस्ने गर्छन् । उनीहरुले तीन ठाउँबीचमा आइपर्ने समस्या र गर्नुपर्ने कामलाई ठूलो स्वरमा कुर्लिएर सम्बन्धित ठाउँमा खबर पुर्याउने गरेको दृश्यले मह शिकारको छुट्टै र फरक अनुभूति दिने पहिलो पटक मह शिकार हेर्न पुगेका बेनीका अमित विश्वकर्माले बताए ।
गुर्जामा भिर मह स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको बलियो स्रोत बनेको छ । पुख्र्यौली पेशाकै रुपमा निरन्तरता पाएको मह शिकारबाट एउटै भिरमा बढीमा ४०० लिटरसम्म मह सङ्कलन हुने गरेको छ । भिरमा मौरीको चाकाबाट निकालिएको काँचो महलाई गाउँ पुर्याएर प्रशोधन गर्ने र स्थानीय तथा राष्ट्रिय बजारहरुमा बिक्रीका लागि पुर्याउने गरिन्छ । मह राम्रो उत्पादन भएको वर्ष १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म मह बिक्रीबाट गाउँमा रकम भित्रिने गरेको स्थानीयवासी भीमबहादुर छन्त्यालले बताए । नौ वर्षसम्म भिरमा चढेर मह शिकारीको रुपमा मह काढेको अनुभव सङ्गालेका छन्त्यालले हरेक वर्ष एक घरमा न्यूनतम ३० हजारदेखि अधिकतम ८० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने बताए ।
मुखमा राख्दा गुलियो र स्वादिलो हुने भिर मौरीको मह औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ । जङ्गलमा चहारेर मौरीले विभिन्न जडीबुटीको रसबाट मह बनाउने भएकाले भिर मौरी जडीबुटीको रुपमा प्रयोग गरिँदै आइएको पाइन्छ । स्थानीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत भिर महको माग आउने गरेको छ । खासगरी नेपालबाट चीन र दक्षिण कोरियाका नागरिकहरुले मह लैजाने गर्छन् । रोग प्रतिरोधात्मक र शक्तिबद्र्धक मानिने भिर मह पहिले घरायसी रुपमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको भए पनि अहिले भने बजारको माग पु¥याउनै मुश्किल हुने गरेको गुर्जाका स्थानीयवासी प्रेम छन्त्यालले बताए । उनका अनुसार अहिले गाउँबाटै प्रतिलिटर एक हजार ५०० रुपैयाँमा मह बिक्री हुने गरेको छ ।
धवलागिरि गाउँपालिकाले मह शिकारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएर स्थानीय बासिन्दाको पुख्र्यौली पेशाको संरक्षण गर्ने र पर्यटनसँग जोडेर लाने रणनीति तय गरेको छ । मह शिकार गर्ने परम्परागत विधि र शैलीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान दिने र प्रशोधनका लागि नयाँ प्रविधिको खोजी गर्ने गुर्जाका वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता झक बहादुर छन्त्यालले बताए । “मह शिकार यहाँका स्थानीय बासिन्दाको पुख्र्यौली पेशा हो, सुरक्षाको हिसाबले यो निकै जोखिमयुक्त छ, हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थित र सुरक्षित गराउन सक्छौँ भनेर आवश्यक पहल थालेका छौँ,” अध्यक्ष छन्त्यालले भने ।
मह शिकारका लागि डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रतिलिटर रु १०० राजश्व तिरेर सङ्कलन पुर्जी लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने धवलागिरि गाउँपालिकाले समेत प्रतिलिटर रु १५ रुपैयाँ निकासी कर तोकेको छ । निकै साहसिक मानिने मह शिकारलाई पर्यटनसँग जोडेर संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् ।
पोखरामा जोखिमपूर्ण तुईन तर्दै स्कूले बालबालिका